नेप्से परिसूचक ०.४९ % ले वृद्धि, ७ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार
चैत १९, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा रू. ७ अर्ब २५ करोड ९ लाख २४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यसैगरी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. ९३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ३१, श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २४७ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ११७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १३ हजार ३१७ कायम भएको हो ।
यसदिन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसिएल) को शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव ५३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. २६ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. ४४४ मा झरेको छ ।